We are Mann! ကျွန်တော်တို့သည် သူရဦးရွှေမန်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် သူရဦးရွှေမန်း လျှောက်သည့်လမ်းကို လိုက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် သူရဦးရွှေမန်းဆိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်နောက်လိုက်ခြင်းမဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့သည် သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်ဖော်ဆောင်သည့်…
(Unicode) သူရဦးရွှေမန်း အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံ ———————————- မြန်မာနိုင်ငံဆိုရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr Scot Marciel သည် ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းအား…